IDRA-21 Qaddarka budada, nolosha badh, Faa'iidooyinka, waxyeelooyinka, iyo dib u eegista
Waa maxay budada IDRA-21?
Gabi ahaanba waa bini aadam in markasta laga feejignaado wax ku siin kara gees. Si loo wanaajiyo waxqabadka qofka, badankood waxay hadda u jeesteen daroogooyinka xariifka ah, oo si fiican loogu yaqaan nootropics. Waxay u badan tahay inaad la kulantay waxyaabo badan oo dheeri ah oo sheeganaya inay kor u qaadaan waxqabadka maskaxda qofka laakiin miyaad u istaagtay inaad isweydiiso naftaada kee baa shaqeeya? IDRA-21 waa daawo laga soo dheefay qaabdhismeedka kiimikada benzothiadiazine. Waxaa jira sheegashooyin ah in IDRA-21 ay xiriir la leedahay Aniracetam, nootropic kale oo soddon jeer ka daciifsan IDRA-21. Waxaad ogaan doontaa in IDRA-21 ay tahay nootropic hadalka ku socota. Waa mid ka mid ah nootropics-ka ugu fiican ee xirxira feer marka ay timaado kor u qaadida xusuustaada, dhiirigelinta, hababka fikirka, iyo hagaajinta wax soo saarkaaga. Way ku cusub tahay suuqa, cilmi-baaristuna wali way socotaa si wax badan looga fahmo 22503-72-6 saameynta xusuusta, awoodda garashada, iyo dib u noqoshada cilladda garashada.
Sidee IDRA-21 u shaqeysaa?
Daawada 'ampakine' ahaan, IDRA-21 waxay ku shaqeysaa isbadalka wanaagsan ee 'allosteric modulation' ee qanjirada 'glutamate AMPA receptors' ee maskaxda. Maaddaama qabtayaasha AMPA ay sababaan gudbinta dhaqsaha badan ee 'synaptic', waxaa jira koror ku yimaadda xaraaradda firfircoonida kacsiga. Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'activation allosteric'.
Qiyaasta lagu taliyey / Isticmaalka Waxbarida ee IDRA-21
In kasta oo IDRA-21 kaliya lagu tijaabiyay xayawaannada, haddana dad badan ayaa adeegsaday, qaar kalena wali waa ku jiraan. Ahaanshaha nootropic caan ah, dad badan ayaa ka hadlay qiyaasta ugu fiican ee siinaysa natiijooyinka ugu badan. Ilo badan ayaa soo jeedinaya in Qiyaasta IDRA-21 waa inay ahaataa 10mg 48 saacadood gudahood. Waad qaadan kartaa midkood kahor ama kadib cuntada maadaama ay biyo-biyo u baahan tahay oo ay kaliya u baahan tahay hal galaas oo biyo ah si loo cuni karo. Haddii ay tahay kulankaagii ugu horreeyay ee nootropic this, waxaa lagugula talinayaa inaad ku bilowdo qiyaasta IDRA-21 oo hooseysa. Ka dib waad ku kordhin kartaa si tartiib tartiib ah markii aad hubto in jirkaaga uusan si xun ula falgalin isticmaalkiisa. Xaraashka nolosrop ee IDRA-21 Marka laga reebo xaqiiqda ah inaad isticmaali karto IDRA-21 kaligeed, waxaad dooran kartaa inaad ku darto nootropics kale ama kaabis si aad uhesho faa'iidooyin garasho oo dheeri ah. Sababtoo ah excitotoxicity-ka iyo la'aanta cilmi baaris ku filan, waa inaad gaabis ku noqotaa. Kuma talineyno inaad iskudarsatid IDRA-21 daawooyinka kale ee ampakine sida Aniracetam. Noocyada kale ee nootropics ee kordhiya heerarka glutamate sidoo kale waa in laga fogaadaa.
Waa maxay faa iidooyinka IDRA-21?
Dhiirrigelinta la hagaajiyay
Qof kasta oo dhiirigeliya wuxuu kordhiyay wax soo saarka. Qaado, tusaale ahaan, haddii aad haysatid waddo aad ku dhammaystirto waxa ugu fiican ee aad qabatid hawl maalmeedkaaga, waxaad u badan tahay inaad gaarto yoolalkaaga. Dhanka kale, hadaadan laheyn dhiiro galinta wax qabad, waxaad dhaawaceysaa rajada koritaankaaga. Mid ka mid ah Faa'iidooyinka IDRA-21 waa in ay horseed u noqoto dhiirigelin hagaagsan taas, oo iyana, kor u qaadidda hufnaanta iyo kor u qaadidda wax soo saarka. Sidaas awgeed, waad ku guuleysan kartaa yoolalkaaga iyo ujeedooyinkaaga adigoon dareemeynin inaad naftaada aad u riixeyso.
Kordhin saxsanaanta hawsha
Waxaan wada ognahay in natiijooyinka kaamil ah ay u baahan yihiin wax ka badan dadaal. Tan waxaa loola jeedaa waa inaad ku shubto waxaaga oo dhan laakiin aad garato inaadan helin saxnaanta 100% ee aad rabto inaad gaadho. Waxa wanaagsani waa Sanduuqa IDRA-21 wuxuu kugu ballanqaadayaa feejignaanta iyo feejignaanta aad u baahan tahay si aad u gaarto natiijooyinka saxda ah ee aad rabto. Marka lagu daro shaqo adag, waad ku nasan kartaa in aad dhali doonto heerka ugu sareeya ee saxnaanta.
Waxay kordhisaa xusuusta muddada gaaban
Markii aad sii gabowdo, waxaad garowsan doontaa in xusuustaada muddada gaaban aysan u sii yaraaneyn sidii hore. Waxaad bilaabeysaa inaad illowdo xitaa waxyaabaha ugu cadcad, oo aad uga hortagto tan, sameynta qoraalo ama qoraallo ayaa saaxiib kuu noqonaya. In kasta oo aad dareemi karto dhibaato in xusuustaada muddada gaaban mar labaad isku mid noqoto, looma baahna argagax. Taasi waa sababta oo ah waxaad kordhin kartaa xusuustaada muddada gaaban mar alla markii aad rabto. Isticmaalka 22503-72-6 waa mid ka mid ah dariiqooyinka wax ku oolka ah ee aad awooddid la tacaalidda mushkiladaha xusuusta ee muddada gaaban. La yaab ma laha in loo isticmaalay daaweynta amnesia. Isticmaalkiisa, waad ka soo kaban kartaa waxaad u baahan tahay nolol maalmeedkaaga.
Waxay leedahay xoogaa saameyn daaweyn ah oo ku saabsan niyad-jabka
Ma waxaad dareentaa murugo, walwal joogto ah, ama walaac dareemaysa? Cunnadaagu ma yaraatay? Ma u halgamaysaa hurdada? Haddii jawaabtaadu haa tahay, markaa waxaad la ildaran tahay murugo. Sidaad u badan tahay inaad ogtahay, diiqadda ayaa si xun u saameynaysa noloshaada, taasoo ka dhigaysa inaadan gaadhin awoodaada buuxda. Nasiib wanaagse, maahan wax adag in laga adkaado adeegsiga IDRA-21. Adoo maskaxdaada siinaya kobcin, waxay kaa caawin kartaa inaad la dagaasho niyadjabka. Sidookale, waxay leedahay saameyn daaweyn ah oo kaaheyn doonta inaad dareento fiicnaan markasta oo aad dareento walwal walwal ayaa kujira.
Kordhinta diiradda maskaxda
Awoodda in aad feejignaato muddo dheer oo aan la kala wareegin ayaa ah muhiimadda ugu weyn haddii aad rabto waxqabad heer sare ah. Haddii aad ogaato in dareenkaaga dareenkaagu uu sii kordhayo, markaa waad isticmaali kartaa IDRA-21. Laga soo bilaabo dib-u-eegista IDRA-21 ee khadka tooska ah, waxaa jira sheegashooyin sheegaya inay kaa caawinayso inaad howsha ku sii jirto oo aad siiso dareenka ay mudan tahay. Taasi waa sababta oo ah waxay kaa caawineysaa inaad maskax ahaan diirada saarto xitaa dhammaan waxyaabaha ku mashquulsan ee ka baxsan.
Kordhinta aragtida dareenka qofka
Dareenka dareenka waxaa lagu sharxi karaa dareenka lixaad ee ay tahay in qof walbaa lahaado. Waa awooda lagu fahmo waxyaabaha isla markaana aad ku fahamto adduunka kugu xeeran sida ugu wanaagsan. IDRA-21 waxay kor u qaaddaa dareenkaaga dareenka ah ee kaa dhigaya mid xariif ah.
Waxay ka caawisaa daaweynta dhowr xaaladood oo neerfaha ah
Maanta, isticmaalka IDRA-21 waxaa lagu soo daray daaweynta iyo daryeelka bukaannada la il daran dhowr xaaladood oo neerfaha ah sida geedi socodka gabowga, garashada garashada, cudurka Alzheimer, iyo cudurka Parkinson.
Awoodaha garashada ayaa aan la xalinin. In kasta oo dad badani u maleeyaan inay hidde-sidedeena go'aamiso, waxaa jira qaabab aad ku gaari karto heerar garasho oo sareysa. IDRA-21 waa mid ka mid ah kobcinta garaadka qofka ee keenta marka la eego hagaajinta garaadka qofka.
Saameynta Dhinacyada ee IDRA-21
Dad badan ayaa ka falceliya dawadan sababtoo ah ma laha waxyeelo. Qiyaasta lagugula taliyo, waxay u badan tahay inaadan la kulmin wax waxyeelo ah ee IDRA-21. Si kastaba ha noqotee, qaar ayaa la kulmi kara waxyeelooyin la xiriira isticmaalka nootropics ama ampakines. Noocan oo kale ah Waxyeeladaha IDRA-21 waxaa ka mid ah;
Kordhinta dareemaha 'glutamate neurotransmission' badanaa waxay sababaan dhibaatooyinkaan soo raaca ee IDRA-21. Badanaa, tani waxay ku dhacdaa dadka waxqabadka AMPA ay yihiin kuwa daran oo aan u baahnayn inay adeegsadaan IDRA-21. Dhibaatooyinka soo raaca waa inaysan, cabsi gelin; daroogadu waxay heshay awood badan, faa iidooyinkuna way ka badan yihiin waxyeelooyinka. Waxay u badan tahay inaadan xitaa ku xanuunsan doonin midkood, Haddii aad ku dhacday istaroog muddadii la soo dhaafay, waa inaad iska ilaalisaa inaad isticmaasho dawadan maadaama ay xaaladdaada ka sii dari karto.
Daraasadaha / Cilmi baarista IDRA-21
Daraasadihii hore waxaa lagu sameeyay awooda IDRA-21 iyo sida ay ugu shaqeyso AMPA. IDRA-21 waxaa lagu tijaabiyey jiirka sheybaarka oo ay ahayd inuu dhaafo biyaha. Waxaa la arkay in jiirka lagu maareeyo IDRA-21 si weyn u shaqeeyay si ka fiican sidii loo barbardhigo kuwa aan ahayn. Waxay taas ku caddeeyeen markii ugu horreysay ee ay ka baxaan bixitaankii galleyda. Saamaynta IDRA-21 iyo huperzine ee xusuusta muuqaalka muuqaalka ee makarayaasha dhalinyarada ayaa sidoo kale loo isticmaalay in lagu tijaabiyo wax ku oolnimada.
Dib u eegista budada IDRA-21
Waxay kordhisaa diiradda maskaxda iyo feejignaanta Edwin R. wuxuu yidhi, “nootropic-kan ayaa garaacaya walxaha kale oo dhan isagoo maskaxda ku haya hal maskax. Waan ku markhaati kici karaa tan maxaa yeelay tan iyo markii aan bilaabay qaadashadeeda, waxaan dareemay faraq badan oo ku saabsan qaabka aan wax u barto iyo shaqada. Waxaan sameeyaa daraasad badan shaqada kadib, waqtiyadi horena, ma aanan awoodin inaan siiyo labadaba feejignaan igu filan. Marwalba waan ku guuldareystay mid, laakiin tani maahan maalmahan. Maamulahaygu wuxuu ii sheegayaa inaan noqday qof howlkar ah halka macalinkaygu dhaho hada waxaan ahay arday aad ufiirsan. Waxaan sidoo kale jeclahay xaqiiqda ah qaadashada IDRA-21 inay aniga aad iigu habboon tahay tan iyo markii aan ku qaato waqti kasta oo maalintii ah galaas biyo ah. IDRA-21 waa wixii aan raadinayay. ” Waxay i caawisay niyad jab fudud Essy J. wuxuu leeyahay, "Dhawaan, waxaan dareemayay diiqad khafiif ah shaqada shaqadeed ee walaaca badan leh, cunug cusub iyo nolosha guud ee dhib weyn igu haysa. Waxaan isku dayay laba maandooriye ah, laakiin midkoodna umaba muuqan inuu iga sii fiicnaanayo. Nasiib wanaag, saaxiib ayaa igu taliyay in aan sameeyo iibso budada IDRA-21 in la isku dayo lana dagaallamo niyad jabka iyo weerarada walwalka. Waa hagaag, waxay ahayd seddex kaliya daawadan, waxayna keentay saameynta ugu fiican. Hadda waxaan u fekeri karaa si toos ah maalinta oo dhan aniga oo aan ka cabsaneyn isbeddellada niyadda. Waan ku amaanayaa qof kasta oo dareema inuu ku dhacay meel geeri ah. ” Waxay ka caawisay gabadhayda inay la tacaasho illowga William S. wuxuu yidhi, “Gabadhaydu waxay leedahay ADHD daran oo xoog saarista xitaa shan sekan waa hawl aad u adag. Budada IDRA-21 waxay leedahay, si kastaba ha noqotee, waxay ahayd badbaadiye tan iyo markii xoogsaaristeeda si weyn kor ugu kacday. Waxay sidoo kale dib u xasuusataa waxyaabo ka badan intii ay horay u isticmaali jirtay, iyada oo ay ugu wacan tahay sheygan. Waxaan sidoo kale ogaaday in aysan wax saameyn ah ku laheyn iyada, tanina waxay ka dhigeysaa inay dhibco sii kordhiso xitaa. Mahadsanid IDRA-21, ilmahaygu wuxuu hada ku noolaan karaa nolol caadi ah. ”
Xagee laga iibsadaa budada IDRA-21?
Sida lagu arkay maqaalka, IDRA-21 wuxuu awood u leeyahay inuu noloshaada siiyo isbadal buuxa. Marka laga reebo inaad kaa dhigto mid wax soo saar badan oo feejignaan leh, IDRA-21 ayaa kaa dhigi karta inaad hesho nolol farxad leh. Waan ogahay inaad hada isweydiin karto halkaad kahelayso. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee dadku wajahayaan ayaa ah helitaanka ilaha lagu kalsoonaan karo ee IDRA-21. Taasi waa sababta oo ah sheygan ayaa isu beddelay jawharad dhif ah iyada oo la tixgelinayo inay weli ku jirto daraasadihii caafimaad ee hore. Taasi macnaheedu maahan, si kastaba ha noqotee, inaadan waligaa gacmahaaga saareynin tayada IDRA-21. Marwalba waad awoodaa iibsato IDRA-21 online una geey goobtaada. Miyaysan taasi kuu badbaadinaynin madax xanuun ka guuritaanka dukaanka oo aad dukaan weydiisato? Amarka nala dhig maanta oo bilow safarkaaga dhiirigelin iyo howl qabad la wanaajiyey.
Fahamka Kobcinta Daroogada, oo uu tafatiray Jerry J. Buccafusco, bogga 92-93
Ampakines: Ampakine, Cx717, Idra-21, Ly-503,430, Aniracetam, Pepa, Farampator, Cx-516, Unifiram, Sunifiram, Lugaag buugaagta, buugaagta guud ee LLC, 2010, bogga 1-36
Caafimaadka & Daawooyinka: Cudurka, Qoritaanka & Daawada, Waxaa qoray Nicolae Sfetcu
1.Waa maxay budada IDRA-21?
2.Sidee ayuu u shaqeeyaa IDRA-21?
3.Qaddarka Lagu Taliyay / Isticmaalka Tilmaamaha IDRA-21
4.Waa maxay faa iidooyinka IDRA-21?
5. Saamaynta dhinac ee IDRA-21
6.Shirkado / Cilmi baaris ku saabsan IDRA-21
Dib u eegista budada 7.IDRA-21
8.Waxaa laga iibsadaa budada IDRA-21?
Palmitoylethanolamide (PEA) Miyuu Leeyahay Macaashka Miisaanku?
Kaabisyada ugu wanaagsan ee Dehydroepiandrosterone (DHEA)
10ka Faa'iidadood ee Caafimaadka ee Glutathione ee Jirkaaga